Uqweqwe Lwe-Pin, Okhiye Bokwezifiso Ngokwezifiso, Indondo Yezemidlalo, I-Lapel Pin - iSanjia
Factory Design ...
Imininingwane Yesiko Imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso koqweqwe lwawo koqweqwe lwawo, amabheji, indondo, uhlamvu lwemali, isihluthulelo, ithegi yenja, ama-cufflink, ibhande lokugoqa ibhande, uphawu lwencwadi, njll.Ifayela lokuklama le-JPG, i-PNG, i-PDF, i-AI, i-CDR, i-PSD, njll. i-aluminium, insimbi, insimbi engagqwali, ithusi, ithusi, isiliva, njll. Usayizi Wokwezifiso Ibanga eli-1-20cm, noma obunye ubungako ngokuya ngesidingo sakho. I-Custom Thickness Range 1-10mm, noma okunye ukushuba ngokuya ngesidingo sakho. Plating Umbala nickel / black nickel / intuthwane ...
Igolide Plated Izingane Brooc ...
Metal Crafts Igolide Plat ...
Bezinto koqweqwe lwawo Pin Cus ...
Ngokwezifiso koqweqwe lwawo Pin ngokwezifiso ...
Idizayini yangokwezifiso kabili ...
Imininingwane Yesiko Imikhiqizo yangokwezifiso ...
Zinc Ingxubevange Die Ekubunjweni ...
Abakwa-Embossmen Abamacala Amabili ...
Emaceleni Double Metal Coi ...
Emaceleni Amabili ngokwezifiso De ...
Design ngokwezifiso Soft Ena ...
Emaceleni Double Custom ...
Umkhuzi Wokwezifiso S Coi ...
Ngokwezifiso Made Marathon M ...
Kwenziwe ngentando Izingane Gradua ...
I-Basketball eyenziwe ngokwezifiso ...
Ifulegi Likazwelonke Lensimbi La ...
Izingcezu ezimbili ezihlanganisiwe ...
Igolide Elifakwe I-Ename Elithambile ...
Kwenziwe ngentando Ibheji Setha C ...
2D 3D Metal Indondo Cust ...
Yonke imininingwane ingenziwa ngezifiso ngokwezifiso O ...
Ngokwezifiso Ilogo Gold Plate ...
Yonke imininingwane ingenziwa ngezifiso ...
Umumo Round Mirror Eff ...
Akunalutho Metal Door Opene ...
Ubhiya Bottle Umumo 3D D ...
ASIKHO Isicabha Sokuvula Isicabha K ...
Imininingwane Yesiko Umkhiqizo wangokwezifiso ...
I-Cute Animal Hard Ename ...
Ukuphrinta Kwensimbi Ngokwezifiso ...
Ifektri yethu ikulungele ngokuphelele ukwenziwa ngokwezifiso kwensizakalo yamabheji woqweqwe lwawo, izinhlamvu zemali, izindondo, okhiye bezikhiye ... Sinemishini yokubumba yakamuva, imishini yokufa / yokunyathela, imishini yokudweba, imishini yokupholisha, njll.
Imboni yethu iqinisekiswe yi-ISO 9001 ne-TUV. Sinohlelo lokuphatha ikhwalithi ephelele ukuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo oyitholile ifanelekile.
Sinikeza ubufakazi bokubhalwa kwezithombe zamahhala nokubuyekezwa okususelwa kumiklamo yangempela noma amasampula wamakhasimende. Ukukhiqizwa ngeke kuqale kuze kuvunyelwe umsebenzi wobuciko.
Singumkhiqizi womthombo onemishini yokukhiqiza okuzenzakalelayo futhi iqembu lethu linokuhlukaniswa okucacile kwabasebenzi, okwandisa kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza.
Iminyaka Engu-15 + Yesipiliyoni Kwezokukhiqiza
Ifektri yethu ibikhiqiza ibheji loqweqwe lwawo kusukela ngo-2005, iningi lezisebenzi zethu zobuchwepheshe zinolwazi olungaphezulu kweminyaka eyi-10 kulo mkhakha. Kusenza ukhetho oluhle kakhulu phakathi kwamakhasimende afuna ukusebenzisana isikhathi eside nomenzi webheji wephini onokwethenjelwa nobuchwepheshe.
I-One-stop Custom Service
Ifektri yethu ingenza insizakalo kusuka ekwakhiweni / ezinhlelweni, okwenza isikhunta, ukusakaza okufa, ukupholisha, ukufaka amapuleti, ukudweba, ukuphrinta ekuhloleni ikhwalithi, ukuhlangana nokupakisha. I-stop-stop service eyodwa iwukonga okukhulu ngezindleko zesikhathi nemali.
Sithumele izidingo zakho eziningiliziwe ukuze uthole izingcaphuno ezinembile, noma ushiye i-imeyili yakho, sizothintana namahora ayi-12.